13 maalin ku xardhayaal si aad u siiso websaydhkaaga qallooc | Abuurista khadka tooska ah
13 Waraaqaha Reactka ee Si Weyn Loogu Sameeyay
A sifiican loo habeeyay soo-qaadaha taariikhda ayaa muhiim ah si martidu aysan ugu khasaarin ilbiriqsi doorashada taariikhda dhalashada ama goorta uu doonayo inuu helo amarka alaabta uu hada ka iibsaday e-commerce. Sababtaas awgeed waxaan kuu keenaynaa 13 taariikhda iyo waqtiga xulashada ee 'React' oo lagu garto naqshadayntooda iyo khibradooda weyn ee isticmaale.
1 Ka falceliya xulista badan
2 Ka falcelinta kala duwanaanshaha waddanka
3 Taariikhaha Falcelinta Dhaladka
4 Xulashada taariikhda RC
5 Ka jawaab Kalandarka
6 Mobile React taariikhda xulo
7 Kalandarka Ka-falcelinta aan dhammaadka lahayn
8 Taariikhaha falcelinta
9 Ka falceliya xulista deegaanka
10 Xulka xulashada fudud
11 Xilliga gelinta
12 Falceliyaha maalinta xulo
13 Taariikh-xardhaaraha FalcelintaJS
Ka falceliya xulista badan
Xulqeeyaha taariikhiga ah ee 'React', marka laga reebo leeyihiin naqshad wanaagsan, Waxaa lagu gartaa iyadoo la oggol yahay xulashada dhowr taariikheed ee kaalandarka uu ina siinayo. Waxaad ka heli kartaa demo si aad uga ogaato meesha sida uu u dhaqmayo xulista falcelintaan. Halkan waxaad ku leedahay booskeeda Github.
Ka falcelinta kala duwanaanshaha waddanka
Un taariikhda qaataha ee React.js taas oo lagu gartaa fudeydkeeda adeegsiga iyo sida loo kala beddeli karo. Fudud fikradeeda, tani waa guusheedii ugu badneyd ee noqota taariikhda iyo waqtiga xulashada boggaaga.
Taariikhaha Falcelinta Dhaladka
Xulleeyaha taariikhda React-kan wuxuu raacayaa qaab la mid ah kuwii hore si loogu beddelo mid kale oo ka mid ah kuwa lagu tilmaamay liistadan. Sidoo kale jadwalka, waxaad dooran kartaa maalmo kala duwan oo aad ugu isticmaali karto shaandhada. Taarikhda kale ee falcelinta xiisaha leh ee aad gacanta ku hayso.
Xulashada taariikhda RC
Waxaad haysaa demo-qaadaha taariikhda soo-qaadaha taariikhda RC ee sii wadaya inuu muujiyo tayo wanaagsan sida inta kale. Mid ka mid ah faahfaahinteeda ayaa ah waxay bixisaa suurtagalnimada in la doorto waqtiga, sidaa darteed way kaga duwan tahay kuwa kale arrintan. Khibrad isticmaale weyn ayaa ah isku xirnaan weyn sida taariikhda iyo waqtiga xulashada ee React.js. Waxaad halkan ku leedahay aad Github.
Ka jawaab Kalandarka
Halkan waxaan si buuxda ugu bixineynaa waqtiga, si aan ula joogno taariikh qaade taariikhda React.js. Waxay la mid tahay tii hore iyadoo dulucdu tahay mid cad, laakiin waxaa lagu kala soocayaa iyadoo loo muuqdo sidii baar lagu furi karo xulashada taariikhda aan dooneyno. Halkan waa inaad haysataa aad Github si aad ugu tagto lambarka isha halkii aad ka heli lahayd demo.
Mobile React taariikhda xulo
Xulqeeyaha taariikhdan loogu talagalay mobilada laga bilaabo React.js wuu ka duwan yahay inta kale miisaan aad u yar. Waxay u taagan tahay naqshadeynta iyada oo la dooranayo walxaha kala duwan ee taariikhda iyada oo loo marayo wheel digital. Waxaad leedahay aad Github si aad ugu soo dhawaato koodhkeeda asalka ah sidaasna aad uga hirgeliso websaydhkaaga.
Kalandarka Ka-falcelinta aan dhammaadka lahayn
Xulqeeyaha taariikhdan aan dhammaadka lahayn ee lagu dhisay 'React' waxaa lagu gartaa mawduucyo, taageerada kumbuyuutarka, xulashada kala duwan iyo goobta. Mid ka mid ah taariikhda soo-qaadayaasha taariikhda ugu dhammaystiran liiska oo dhan. Halkan waa inaad haysataa aad Github dhammaan macluumaadka haray kadib markaad ku raaxeysato demo. Kooxda dhexdeeda waxaad kuheleysaa taxanaha xulashooyinka oo dhan si aad mid walba isku daydo oo aad markaa fikrad fiican uga hesho suurtagalnimadeeda.
Xusuusiyaha taariikhda ee React ee lagu kala sooco loogu talagalay mobilada taasna waxaa lagu soo bandhigaa edeb aad u wanaagsan. Sidoo kale wuxuu leeyahay aad Github si aad u ogaan kartid faahfaahin kasta oo ka mid ah oo markaa aad ugu qaadatid websaydhkaaga. Waxaad haysataa fursado kaladuwan oo aad u tiro badan si markaa demo aad ugu hagaajin karto habkaaga oo sidaas ayaad wax badan uga heli kartaa.
Ka falceliya xulista deegaanka
Waxaan kugula talineynaa inaad dhaafto waxaa qoray Github si loo ogaado naqshadeynta taarikhyahan xulista taariikhdan ee 'React'. Waan kala saari karnaa maxaa yeelay isticmaal API-yada DataPickerAndroid, TimePickerAndroid iyo macruufka DatePicker. Marka is dhexgalka ayaa kuu dhawaaqi doona adiga haddii aad u isticmaasho inaad wax ka qabato mid ka mid ah OS-yadaas qalabka moobiilka. Wanaagsan in lagu hirgeliyo barnaamij loogu talagalay mid ka mid ah labada nidaam ee hawlgalka lagu sheegay sida Android iyo iOS.
Xulka xulashada fudud
Xulleeyaha taariikhda aad u fudud ee 'React.js' waxaad ka heli kartaa tusaalooyin adeegsi oo dhowr ah degelkeeda demo. Waxaan sidoo kale leenahay aad Github si aad u ogaato inta kale ee faahfaahinta xulistaan ​​fudud ee 'React'. Mid kale oo xiiso leh ma aha oo kaliya fudeydkeeda, laakiin waa iyada xulashooyinka qaabeynta kala duwan si loo siiyo degelkeenna mid aad u qurux badan oo fudud.
Xulasho kale oo taariikhi ah oo ikhtiyaariga ah in sidoo kale la doorto waqtiga lagu daro, markaa way imaaneysaa iyadoo dhameystiran. Ku shaqeeyaa daqiiqado naqshaduna waxay ka timaaddaa isla degelka Dribbble. Xaqiiqdii waad ku jeclaan doontaa naqshadeynta iyo xarrago ee ay siiso bogga ay ku rakiban tahay. Kani waa Github-kaaga si aadan waxba ugu seegin tusaale kale oo weyn oo ah waxa xusha taariikhda iyo waqtiga.
Falceliyaha maalinta xulo
Xulqeeyaha taariikhdan ee 'React' waxaa lagu gartaa 9KB ee gzipper, marka laga reebo ahaanshaha si fiican loo hagaajin karo, la heli karo, Taasi waxay taageertaa ARIA oo kuma xirna wax dibadda ah. Abaabulid waxaan u jeednaa inaan dooran karno luqadda jadwalka si loogu beddelo afkeenna. Mid kale oo kamid ah xulista ugu dhameystiran liiskan falcelinta taasna waxay nagu adkeyneysaa inaan go'aan ka gaarno mid.
Waxaad haysaa demo sida kuwa kale oo kale si aad ugu ogaatid goobta taariikhdan xulashada oo lagu garto aalad qalab ah oo markii la riixo kalandarka furo. Waxay leedahay xulo xulasho waana xulasho tayo sare leh qaabeynta. Ma yahay minimalist, sidaa darteed waa la isku dari karaa nooc kasta oo degel ah. Waxaad haysataa Githubkiisa si aad u ogaato faahfaahinta inteeda kale oo aad u isticmaasho lambarka sida aad rabto fadlan websaydhkaaga.
Waxaan kuu daayey liis kale, in kastoo waqtigan foomamka CSS si ay u fuliyaan wixii hada ka dambeeya oo aad leedahay liis wanaagsan oo aad ku doorato qaabkaas xarrago ee boggaaga.
AR.js si ay xaqiiqada u kordhiso ugu keento shabakadda
Wacom waxay ku soo bandhigeysaa buuggeeda cusub ee Spain: Wacom Intuos cusub, Cintiq Pro 24 iyo in ka badan